Efa misokatra ny lalana eo Andranomena miakatra any Ambatolampy ao anatin’ny boriborintany VI. Vita “pavé” sy “beton” ny lalana ary voarafitra vato ny lakandrano izay niteraka ny fahasimban’ny lalana hatramin’izay. Hatry ny omaly, efa azon’ny fiara nifamezivezena izany lalana izany. Betsaka ireo fiara misafidy io lalana io hialana amin’ny fitohanana lavareny miakatra eo Ambohibao. Saika mampiasa izany avokoa ireo mody mianandrefana rehetra toy ireo mponin’Ivato sy Ambohidratrimo iny.
Novorin’ny commissariat central de Police, omaly tao Antsirabe, ireo mpivarotra antsinjarany zava-pisotro misy alikaola ao an-tanàna. Teo koa ireo mpandraharaha sy tompona karaoke ary tompon’ireny trano fandihizana ireny.
Nisy ny fanentanana azy ireo amin’ny fanajana sy fampanajana ny lalàna mifehy ny asany mba ho matihanina tanteraka eo am-panaovana izany. Ankoatra izay ny fiaraha-mientana amin’ny fitandroana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ao amin’ny kaomininina ambonivohitra Antsirabe.
Ho malefaka na antoniny ny rotsak’orana (25 hatramin’ny 50 mm) ny herinandro voalohany, izany hoe, ny 20 hatramin’ny 26 aogositra any amin’ny distrikan’i Sambava, any Antalaha, any Sainte-Marie, any Mananara Avaratra, any Soanierana Ivongo, any Fenoarivo Atsinanana ary any Toamasina.
Ny herinandro faharoa, izany hoe, ny 27 aogositra hatramin’ny 2 septambra 2018, malefaka na antoniny ny rotsak’orana (25 hatramin’ny 50m) amin’ny distrikan’Antalaha, i Sainte-Marie, i Soanierana Ivongo, i Toamasina, i Vohibinany, i Vatomandry, i Mahanoro, i Nosy Varika, i Mananjary, i Manakara, i Farafangana ary i Vangaindrano.